bhimphoto: November 2014
तस्बिरका पछाडि त्यस्तो ठूलै भन्न पर्ने कुरो छ जस्तो लाग्दैन । तैपनि हराउला भनेर ब्लगमा जतन गर्न मन लागेर पोष्ट गरिएको हो ।
२०७१ मंसिर १२ शुक्रबार (हिजो) शम्भु पोखरेल भाइलाई भेट्न विराटनगर अस्पताल (विराट नर्सिङ होम) जाँदा पल्लो बेडमा यस्तो देखियो । जो फोटो बोल्छ ।
शम्भु अस्ति राति डेरामा लडेछन् । बंगारा भाँचिएछन् । उपचारार्थ भर्ना छन् । म पुग्दा उनी निदाइरहेका थिए । बोलाउन मन लागेन । उनको नजिकको अर्को बेडमा यी युवक सानो बच्चोको नङ काटिदिइ रहेका थिए । टाउको अलि असामान्य देखिने बच्चोको हेराइ जिज्ञासू थियो । मोबाइलले यो तस्बिर खिचें । अनि ती युवकसँग कुरा गरें । उनको घर सुनसरीको चिमडी रहेछ । काम भारतको चेन्नइमा गर्दै आएका ।
एक महिनाअघि छोरा निकै बिरामी भएको खबरपछि घर आएछन् । 'यसको निधारमा पानी जमेको छ । इलाज सुरू भयो', उनले भने, 'ठीक हुञ्जेल बस्छु ।' चारमध्ये आफूसहित दुइभाइ चेन्नईमा काम गर्न थालेको धेरै वर्ष भएको उनले बताए । 'यहाँ भनेजस्तो काम मिलेको भए टाढा जान पर्दैनथ्यो होला । के गर्ने मजबुरी छ', दुखेसो पोखे ।
उनको यो ३ महिनाको छोरोअघि ४ वर्षकी छोरी रहिछन् । 'परिवार लैजान मिल्ने जागिर छैन । त्यसैले गाउँमै छोडेको छु । बेला बेला आइरहन्छु', उनले बताए । धेरै रोइरहने, नसुत्ने गर्न थालेपछि सुरू भएको छोराको उपचारमा धेरै हैरानी खेप्नु परेको उनले सुनाए । 'यसलाइ भएको के हो भनेर जान्न नै धेरै हैरानी भयो । जहिल्यै जँचाउँदा डाक्टरले पेट दुखेको दबाइ दिएर पठाउने !', उनले भने, 'बल्ल पत्ता लाग्यो यसको निधारमा पानी जमेको कुरो ।' उपचार सुरू भएपछि केही सन्तोक लागेको उनको भनाइ थियो ।
शम्भुकी श्रीमति अाइन् । उनी ब्यूँझेछन् । म अब उनीहरूसँग कुरा गर्न थालें । केहीबेर पछि 'ल आउँदै गरौला' भनेर बिदा मागें । फिर्दा फिर्दै त्यो बच्चाको बेडमा हेरें । उसको नाम 'कृष्ण यादव' लेखेको रहेछ । बाबुको नाम नसोधे नि मलाइ त्यो शिशुको नाम थाहा भो ।
कुरो सकियो ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 5:47 PM
लान क्यै पाइन्न
तैपनि दैनिकी दौडधुपको
असन्तुष्टिका गठरी बोकेर
यात्रा आफ्नै गतिमा चलायमान हुन्छ
भन्नेहरू पनि जान्दैनन्
टिकट कहाँसम्मको हो
उत्रनुपर्ने कता हो
अन्जान यात्रीहरू भेटिन्छन्
कानमा मसिनो मसिनो गरि
बाँकी के छ ?
यै चप्पल छुटेजस्तो मात्रै ।
सप्तकोशी, पश्चिमी तटबन्ध क्षेत्र
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 2:38 PM
BIRATNAGAR, NOV 18 - With an intention to help female students, three graduate level students from Kathmandu University (KU) have helped constructatoilet for female students at Bidhya Bikash Primary School in Biratnagar-19.
Using money collected through donations, students Aastha Basnet, Sahara Basnet, and Aarju Basnet have constructedathree-roomed building with two toilet s andabathroom for female students at the cost of Rs 275,000.
The school, which runs classes from grade one to eight hasatotal of 336 students, of which 206 are females. However, due to lack of separate toilet s for girls, the female students had been facingahard time and had trouble attending the school onaregular basis.
“We felt the need to do something after learning about their plight and managed to collect Rs 300,000 in donations through various programmes,” Aastha said during the handover ceremony on Friday, adding that the remaining amount will be used to procure stationeries for the students. “Although it is notabig achievement, we wanted to spread the message about their problem and draw the attention of stakeholders and concerned authorities,” she added.
The trio had learned about the plight of the students when they had reached Mangalbare in east Morang during March last year to distribute clothes and relief materials. As the students were compelled to abandon school during their menstrual cycle owing to lack of separate girl’s toilet , affecting their studies, we wanted to do something that would sendamessage to the society, Aastha said. Previously, the school only hadatwo-roomed toilet , one for the teachers and another for students, said an eighth grader Laxmi Sharma.
Stating that the toilet used to be filthy and female students had to play truant during their menstruation, Laxmi said that they were grateful now that they did not have to refrain from attending school on such pretexts.
Published in The Kathmandu Post on: 2014-11-18 (4th page)
url link : http://goo.gl/7OE5JS
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 1:23 PM
MORANG, NOV 14 - Constantly ridiculed by his peers who call him “two-headed”, 12-year-old Raghubir Mudiyari of Bhedibathan, Babiyabarta-3 has lost all interest in his studies. Lamenting that even his teachers did nothing to help him stave off the torments, Raghubir said he no longer wants to attend school.
A fifth grader at local Janapriya Higher Secondary School,ahuge lump of flesh which is round in shape has grown on Raghubir’s head. And it has been growing by the day. Apparently, Raghubir is not the only one from his family affected by the debilitating condition, as his mother, two sisters andayounger brother have also been suffering from this disease.
Diagnosed as neurofibromatosis,arare genetic disease which causes nervous system tumors, Dr Ghana Shyam Jha of Koshi Zonal Hospital said that “the disease has no cure”.
“It is an inherited disease. However, despite the growth of tumors on the body, it does not pose cancer risk,” Jha said, adding that they cannot do anything for the patients with such conditions apart from consoling them that it would not poseamortal threat.
While Raghubir’s mother Phool Kumari is in no condition to work due to the benign tumors on her head also spreading to her shoulders and other parts of her body, even Radhika, Raghubir’s elder sister, has been troubled after the disease started manifesting on her legs.
“I am worried as to how I should take care of my family, as our mother cannot work and following the manifestation of the disease in me, I too have trouble working in the fields,” Radhika lamented, adding that she has not
talked about her condition to anyone as she fears she might not get any work which could seriously affect their daily livelihood.
“When we think about our father and the debt he had taken to build this house, we don’t know what to make of our condition,” Radhika said. Their father, the only member of the family not affected by the disease, had passed away justamonth ago.
Although senior surgeon Dr Sunil Chandra Adhikari at the Koshi Zonal Hospital said that the tumors can be cut down to ease the pain of the affected, the right kind of treatment still depends on the individual situation of the patient.
However, that too is not an option for the economically deprived Mudiyari family afflicted by the debilitating genetic disorder.
बिसेक नहुने रोग लागेपछि ....
एकजना मित्रको इ-मेल पाएपछि जिज्ञासा भयो । फोन गरें । ठेगाना सोधें । अनि उहाँले फोटो र सानो क्याप्सनमा दिन खोज्नु भएको खबरलाई आफैं पुगेर एउटा सिंगो समाचारका रूपमा लेख्न मन बनाएँ । धेरैपल्ट खबरको सुत्र यसरी पनि पाउने हो ।
सुत्र चिनेर पच्छ्याउन सके सग्लो पठनीय समाचार बन्छ । मेल पाएको भोलिपल्ट अफिसतिर नआइ मेरो मोटरसाइकल विराटनगरबाट पूर्व सिंघिया तरेर हान्नियो ।
गाउँमा पुराण जारी थियो । आमा र मेरी श्रीमतिको आग्रह त्यहाँ गइदिए, वाचक भेटिदिए हुन्थ्यो भन्ने । मन्दिर निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन गरिएको आयोजना ठीकै हो । तर, त्यहाँ म जानु भनेको उनीहरू अखबारमा समाचार र फोटो छापिएर आअोस् भन्ने आसमा छन् भन्ने प्रष्ट थियो । समाचारका भीडमा पुराणका समाचार निकै फरक र ध्यान आकृष्ट गर्ने क्षमता बोकेको हुनुपर्छ । म तेता गएर मात्र केही हुन्नथ्यो । बरू गाउँ जानु, कुनै दुःखीका लागि भर हुने समाचार लेख्नु धर्म हो जस्तो लाग्छ । धेरैपल्ट समाचारका कारण मान्छेका दर्द निवारण भएका छन् । त्यो बेला आत्मिक आनन्द पनि महसुस हुन्छ । लाग्छ, धार्मिक समारोहमा उपस्थिति जनाउनुभन्दा त्यताको आनन्द कैयौं गुणा ठूलो छ । त्यस्ता स्थिति कामको दैनिकीमा उर्जा दिने प्रकारका नै हुन्छन् ।
पत्रकारितामा एउटै आनन्द के हो भने भलै वेतन थोरै र जिन्दगी अभावमै बितोस् । तर, कतै गएर 'म फलानो' भन्दा मान्छेले समाचारका कारण चिनिदिए काम गर्ने उर्जा त्यहीँबाट प्राप्ति महसुस हुन्छ । हुन त बिगत आठ महिनादेखि मेरो काम गराई भुमिगत पाराको भएको छ । समाचार संयोजकको जिम्मेवारीले मलाई पहिले जसरी घुमिहिड्न मिल्दैन । हरेक साता सहकर्मीलाई नयाँ विषय सुझाउने, उनीहरूका सुझावबाट विषय छनोट, अनि पठाइएका समाचारमा फाइव डब्ल्यु वन एच र आफ्नो पत्रिकाको शैलीमा लेखाइ कसरी मिल्छ भनेर काटछाँट र पालिस लाउनेका काम छन् ।
केही सजिलो सम्पादनका काममा अग्रज सहकर्मी माधव घिमिरेका कारण छ । उहाँलाई मैले आफू कतै जाने जानकारी दिएर हिड्न त मिल्छ । तर, साथै बसेर काम गरिँदा त्रुटी भरसक नजाअोस् भनेर सल्लाह भइरहने भएकाले दुवै वल्लोपल्लो टेबलमा कम्प्युटरका की-बोर्ड टाकटाक टुकटुक पारिरहेका हुन्छौं । समाचार सम्पादन,जस पाउने र आफू देखिने कामै होइन । नगरी पनि भा छैन । जिम्मेवारी पछिका अवधि मैले पहिले जसरी शनिवारे कोसेलीमा 'चरा-जीव र वातावरण' विषयमा लेख्न पाएको छैन । ती विषय लेख्नका लागि समय र खर्चको माया नगरी हिड्नै पर्छ । मान्छेका कुरा लेख्न परे गाउँबस्ती, जीव र वातावरण लेख्न परे जंगल, खोलानाला । त्यसैले समय लाग्छ ।
यी गन्थन यस्तै हुन् । यसपटक मेरा मित्रको एउटा मेलका कारण समाचार लेख्न मन लाग्यो । अब अघि बढौं ।
मित्र (उमेरमा अग्रज) राजन पौडेल प्लान नेपालमा काम गर्नु हुन्छ । उक्त संस्थाको कार्यक्रमभित्र असक्त, अपांग, विपन्नलाई सघाउने कार्यक्रम भएकाले त्यस्ता मान्छे र परिवार उहाँले भेटिरहनु नौलो थिएन । तर, उहाँको राम्रो बानी- अवस्थाले असक्त भएपनि पौरखले बाँचेकाहरूका कथा हरेक साता स्थानीय दैनिक 'उद्घोष' मा लेख्नु हुन्छ । उहाँको स्तम्भको नाम नै पौरखी पात्र छ ।
प्लानले मध्य र सुदुर पश्चिममा सञ्चालित कार्यक्रममा लामो समयदेखि कार्यरतका लागि पूर्व देखाउने कार्यक्रम राखेछ । यही बेला आफ्ना ती साथीहरूलाई गाउँ घुमाउन पुगेका राजनजी बबियाबिर्ताको भेडीबथान पुग्नु भएछ । बेलुकी मलाई तस्बिर मेल गरेपछि फोन गर्नुभयो । ती परिवारको उपचारका लागि कोही दयालु वा रूची र क्षमता राख्ने कसैको ध्यान आकृष्ट गर्न सके भलो हुन्थ्यो भन्नुभो ।
पत्रकारितामा परोपकारको धार पनि छ । लेखेर भलो हुन सक्छ भने किन बल नगर्ने ? म उहाँको कुरामा सहमत भएपनि एउटा फोटो र थोरै जानकारीले सूचना पूरा हुने थिएन । त्यसैले म ती परिवार भेट्नैका लागि जानुपर्ने भयो । मोबाइलमा कुरा भइरहेकाले राजनजी कर्सियामा भेट हुनुभयो । हामी उनीहरूको गाउँ पुग्यौ । त्यो ठाउँ बिराटनगरबाट करिब १६/१७ किलोमिटर टाढा हुँदो हो । कर्सियाबाट कालोपत्रे सडक छाडेपछि करिब ९/१० किमिको दूरिमा भित्री बाटो ।
घाम-धूलो खेप्दै हामी पुगेपछि थाहा भो- कान्छी छोरी भेट्न फूलकुमारी विराटनगर पुगेकी छन् । घरमा १२ वर्षे रघुवीर र ठूलीछोरी राधिका थिए । फोनमा कुरा गर्न सम्भव भएपछि फूलकुमारीलाई विराटनगर नै पुगेर भेट्ने भइयो । घरमा भेटिएका दिदी-भाइ र छिमेकीसँग कुरा गरियो । अलि वर बबिया बजार आएर स्वास्थ्य चौकी इञ्चार्जलाई भेट्न मन लाग्यो । दिउँसो करीब डेढ बज्दै थियो ।
सप्तरी, मलेकपुरका नन्दलाल साह (चौकी इञ्चार्ज) बेलैमा हाजिरी बजाएर निजी कामतिर हिडिसकेका रहेछन् । खबर पटाउन लाएपछि केहीबेरमा पान चपाउँदै आए । राम्रै कुरा भयो । फूलकुमारीलाई धेरैअघि देखेको उनले बताए । अहिलेको अवस्था उनलाई थाहा रहेनछ । ४० सालदेखि स्वास्थ्य सेवाको जागिरमा हिडेपछि आफ्नो थातथलो आफूले बबियामै सारेको सुनाएका उनको कुरो प्रष्ट थियो -'त्यस्ता रोग चिन्ने र उपचार गर्ने ल्याकत हामीसँग हुँदैन । छैन पनि ।'
'उनलाई घर फिर्न ढिला हुन्छ । छिटो आउनु हुन्छ की' विराटनगरबाट फोन आयो । फूलकुमारीको छोरी बसेको घरको बुहारीले गरेकी थिइन । मैले हतार हतार फिरेर राजनजीलाई कर्सियामा छाडें । अनि विराटनगर फिरें । भेट भयो ।
फूलकुमारीको छोरी बसेको घरका मुली छबिलाल मैनालीले भने 'यो यसको पुरानो रोग हो । निको भएन ।' आफूले १४/१५ वर्षअघि कुष्टरोग निवारण परियोजनाको क्लिनिकमा जचाउँन ल्याएको सुनाए । त्यो बेला डाक्टरले फूलकुमारीलाई कुष्टरोग नभएपनि 'यो सरूवा रोग होइन' भनेका रहेछन् । अर्का एक चिकित्सकले फूलकुमारीको बिहेअघि नै 'यसको बिहे नगरिदिनु । सन्तानमा यस्तो रोग देखिन सक्छ' भनेका रहेछन् । तर, उनको बिहे भयो । शरिरमा फोका बढे । मासू लत्रियो । अब सन्तानमा यस्तो समस्या देखिएपछि गरिब परिवार मर्कामा थियो ।
मैनाली र फूलकुमारीका कुराबाट के प्रष्ट भयो भने उपचार लाउन उति दौडधूप गरेनछन् । जनबनी गरेर खाने परिवारले कति पो गर्न सक्ने । उनीहरू चल्पसंख्यक झाँगड समुदायका । लोग्नेको पेशा दिगो थिएन । त्यसै पनि उनीहरूको परिवारका अधिकांश पुरूष दिनभर काम गरेर बेलुकी रक्सीमा सबै उडाउने मैले सुनेको थिएँ । फूलकुमारीका लोग्नेको बानी त्यस्तै रहेछ । ऊ मर्‍यो । उसको काजकिरियाको ऋण । ऐलानीमा बनाएको सानो झुप्रो । त्यो बनाउँदाको पनि ऋण रहेछ ।
बृद्ध मैनालीको कामत त्यो गाउँमा र घर विराटनगरमा । नजिक भएकाले त्यहाँका मुडियारी उनले अराउपराउ गर्ने कामदार । जानेबुझेका पहाडे छिमेकीको भरमा उनीहरू रहेछन् । काम गर्दै पढाइदिन फूलकुमारीको छोरी अन्जना उनीकहाँ बसेकी रहिछन् ।
अवस्था बारे सोध्दा र तस्बिर लिँदा उनीहरू मप्रति आशावादी देखिए । यो स्वभाविक पनि थियो । मान्छेका घाउ कोट्याएपछि निदान पहिल्याइदेला भन्ने लाग्छ नै । धेरैअघि म जसरी नै कुनै पत्रकारले सोधेर गएका रहेछन् । खबरमा आयो आएन उनीहरूलाई थाहा रहेनछ । मलाई पनि थाहा थिएन । मैले आश्वासन दिइँन । रोगको कारक र निदान मलाई थाहा थिएन । केही हुन सके खबर गर्ने भन्दै म हिँडे ।
मलाई अफिस पुग्नुअघि कुनै डाक्टरलाई भेट्नु थियो । उनलाई आखिर भएको के हो ? म चर्मरोगका डा. अविनारायण घिमिरेको क्लिनिक पुगें । उनी केही साताका लागि दिल्ली गएकाले भेट हुन नसक्ने क्लिनिक कुरुवाले सुनायो ।
बाटामा ग्रीनक्रस अस्पतालछेउ एउटा पसलमा डा. रोशन पोखरेल भेटिए । उनी अहिले कोशीअञ्चल अस्पतालका मेसु हुन् । म मनोविज्ञानको बिद्यार्थी, उनी साइक्रेटिक डाक्टर । गफ मिल्ने भएकाले मैले क्यामेरा झिकेर 'यस्तो समस्याबारे कसको कोट लिन ठीक पर्छ' सोधें । उनले रोगका बारेमा बताए तर, कोट गर्न डा. घनश्याम झाको नाम सुझाए । करिब ४ बज्दै थियो । पोखरेल र झा दुवै सरकारी ड्यूटी सकेर निजीमा आइसकेका थिए । क्लिनिकमा नभेटिएका डा. झालाई खोज्न पोखरेल आफै मसँग अब पैदल यात्रामा थिए । डा. झा गोल्डेन हस्पिटलमा भेटिए । कुरा भयो । उनले भने 'यो निको हुने रोगै होइन । जिन डिसअर्डरको उपचार विकसित भएको मैले अहिलेसम्म सुनेकै छैन ।'
गोल्डेनबाट तल झरेपछि बाटामा सर्जन डा. सूनीलचन्द्र अधिकारी पनि भेटिए । उनले यस्ता कुरा अखबारमा ल्याएर प्रचार गर्नुको साटो पलाएर झोल्लिएको मासू काटेर हटाउन मद्दत गरे हुने बताए । भने 'बेकारमा के छाप्नुहुन्छ । बोलाइदिनुस् । हेरौं । सकेको उपचार लाउनु पर्छ ।' उनको कुरा मनासिब नै थियो । तर, यति लामो बाटो गएर ल्याएको खबर नलेख्नु पनि कसरी ?
डाक्टरहरूले जे भनेका थिए, अफिस आएर गुगल सर्च गर्दा मैले त्यही भेटें । जीनबाट आउने रोग । निदान नेपालमा छैन । तर, समाचार त लेख्नै थियो, लेखियो ।
कान्तिपुर दैनिकमा २७ कात्तिक २०७१ बिहीबार (11/13/2014) पृष्ठ ११मा समाचार छापियो । मैले ब्लगमा राखेको शिर्षक पठाएको थिएँ, छापिँदा शिर्षकचाहिँ फेरिएछ । प्रकाशित हूँदा केही शुद्धाशुद्धी र केही अनावश्यक वाक्य काटिए होलान् । लेखेको यस्तो थियो, जो धेरै फरक छैन ।
उपचार गर्दा पनि बिसेक भएन रोग
दुःखीको घरमा मात्र तेरो वास हुने भए
हे इश्वर दया राखी मलाई अझ दुःख दे ।
बबियाबिर्ता (मोरङ)- इश्वर जहाँ रहन्छन्, त्यहाँ सुखशान्ति हुन्छ भनिन्छ । त्यसैले समले कुटनीतिक पाराले यी पंक्ति लेखेको हुनुपर्छ । तर, जहाँ दुःखीका घर छन्, तिनमा अझ दुःख थपियो भने मोरङ, बबियाबिर्ता-३ भेडिबथानका अल्पसंख्यक मुडियारीको एउटा परिवारमा परेजस्तै पीडा हुन्छ ।
'दुइ टाउके आयो, दुइ टाउके आयो भनेर साथीहरू जिस्क्याउँछन्', उनले नियाउरो हुँदै भने, 'सधैं त्यस्तै । सर-मिसले पनि केही गर्नुहुन्न ।' बबियाबिर्ता-३ को भेडिबथान टोलका १२ वर्षीय रघुवीर मुडियारीको टाउकोमा मासु पलाएर ठूलो डल्लो हुँदै आएको छ । स्थानीय जनप्रिय उच्चमाविको कक्षा ५ का यी छात्रलाई साथीहरूले जिस्क्याउने गरेकाले स्कुल जान रुचि लाग्न छाडेको छ ।
फोका आउने, बढ्ने र मासुको डल्लो हुँदै जाने समस्याका पीडित परिवारका उनी एक्ला सदस्य होइनन् । आमा फूलकुमारीको अझ विजोक अवस्था छ । टाउकोमा देब्रेतिर मासू बढेर आँखै छोपिने भएको छ । जीउभरि गिर्खा पलाएका छन् । '१४/१५ वर्षो उमेरमा सानो फोका आएको थियो', ४५ वर्षीया फूलकुमारीले देब्रे काँध देखाइन र भनिन् 'अलिअलि चिलाउँथ्यो । विस्तारै बढ्दै गयो । अनि जीउभरि आयो ।'
सुरूमा गाउँको स्वास्थ्यचौकी, पछि विराटनगरको कोसी अञ्चल अस्पतालमा देखाएको बताएकी उनले भनिन् 'बिसेक भएन । जँचाउन छाडियो ।' अहिले छोराछोरीलाई पनि यस्तो आउन थालेपछि भने उनलाई चिन्ता छ । उपचारपछि क्षयरोग बिसेक भएको भनिएका उनका पति दमका बिरामी थिए ।
'बुवा बितेको एक महिना पनि भएको छैन', ठुली छोरी राधिकाले भनिन् 'बुवालाई त्यस्तो रोग थिएन । आमालाई भएको देखेका छौ । अहिले मेरो हात-पाखुरामा आयो ।' उनले पाखुरा देखाइन । परिवारमा आमा, २५, १६ वर्षका दुइ छोरी, १२ र ९ वर्षका छोरा गरी पाँच सदस्य छन् । समस्या नौ वर्षका सुदीपबाहेक सबैका शरीरमा देखा परेको छ । गाउँकै छविलाल मैनालीका घर विराटनगर बसेर ८ कक्षा पढ्दै गरेकी अन्जनाको पनि टाउकोमा गिर्खा बढ्न थालेको छ ।
ऐलानी जमिनमा घर बनाइ बसेको परिवार अर्काको खेतमा ज्यालादारी काम गरेर गुजारा चलाउँछ । छिमेकी बिर्सो मुडियारीले भनिन् 'एकपल्ट गाउँमा चन्दा उठाएर इलाजमा पठाएको पनि हो । तर, निको भएन । ठूलो हस्पिटलमा जाने हैसियत नभएको परिवारले कसरी इलाज गरोस् ।'
'गरिब परिवार हुन् । मैले अन्जनालाई पढाइदिन राखेको छु, त्यसको पनि टाउकोमा गिर्खा बढ्न थालेको छ', मैनालीले भने, '१३/१४ वर्षपहिले फूलकुमारीलाई विराटनगर बोलाएर जँचाउदा डाक्टरले वंशाणु रोग हो, उपचार हुँदैन भनेका थिए ।' उनका अनुसार त्यसबेला कुष्ठरोगको उपचार केन्द्रमा जाँच गराइएको थियो । चिकित्सकले कुष्ठरोग नभएको बताए पनि यस्तो समस्या फूलकुमारीका सन्तानमा देखिन सक्ने बताएका थिए ।
परिवारमा अहिले जनबनी गर्न आमालाई सघाउने राधिका हुन् । 'आमा भारी बोक्न सक्नुहुन्न । टाउको दुख्छ', राधिकाले भनिन् 'भाइबैनीको हेरचाह गर्ने मलाई पनि यस्तो फोका बढ्न थालेपछि चिन्ता लागिरहन्छ ।' अर्काको खेतमा काम नगर्दा बिहान-बेलुकीको खाना नपाक्ने भएकाले उपचारका लागि कतै कसैलाई नभनेको बताइन । उनले भनिन् 'बुवाको काम र घर बनाउ“दाको ऋण सम्झँदा हामीलाई यो रोग हो कि के हो याद हुँदैन ।'
बबियाबिर्ता स्वास्थ्यचौकीका इञ्चार्ज नन्दलाल साहका अनुसार गाउँमा फूलकुमारीबाहेक अरू परिवारका कसैलाई पनि यस्तो समस्या देखिएको छैन । 'उ पनि धेरै वर्ष पहिले एकपल्ट जँचाउन आएकी हो', उनले भने, 'त्यस्तो रोग के हो भन्ने नजानी गाउँको सानो स्वास्थ्य चौकीमा हामीले उपचार चलाउने क्षमता कसरी होस् ।'
फूलकुमारी र उनका सन्तानका तस्बिर देखाएपछि विराटनगरको कोशीअञ्चल अस्पतालका छाला तथा कुष्टरोगका चिकित्सक डा. घनश्याम झाले भने 'यो जेनेटिक डिअर्डर हो । यसको उपचार कतै भएको मैले सुनेको छैन ।' उनका अनुसार मेडिकलको भाषामा यो रोगलाई 'न्यूरोफाइब्रोमेटोटिस' (neurofibromatosis) भनिन्छ । 'यो रेयर केस होइन तर, देखा परेर समस्यामा परेका बिरामी आइरहन्छन्', उनले भने, 'यसले अनुहार र शरिरमा गिर्खा आएर सुन्दरता बिगार्नेबाहेक अरू शारीरिक समस्या हुँदैन भन्ने हामीले पढेका हौ ।' वंशाणुबाट आउने रोग भए पनि श्रीमान/श्रीमति एकअर्का जसलाई समस्या छ उसकोलाई अर्कोको जिनले जितेका खण्डमा सन्तानमा नआउने उनले बताए । उनले भने 'फूलकुमारीको जिनले उनको श्रीमानको जिनलाई डोमिनेट गरेकाले सन्तानमा यस्तो समस्या आएको हुनुपर्छ ।'
यस्ता बिरामीको राम्रो जाँच गरी क्यान्सर भए/नभएको पत्ता लगाउन जरुरी हुने उनले बताए । 'गिर्खा छन् तर, क्यान्सर छैन भने ढुक्क भए हुन्छ', उनले भने, 'अन्यथा यसको उपचार खोजेर हिड्दा केही भेटिँदैन ।' झापामा रहँदा आफूले ११/१२ जना यस्ता बिरामी हेरेको उनले बताए । उनले भने 'मैले दिने सल्लाह चिन्ता नलिनुस् भन्नेमात्रै हो । उपचार नै छैन ।'
बरिष्ठ र्सजन डा. सुनीलचन्द्र अधिकारीले भने 'केस हेरेर मात्रै केही भन्न सकिन्छ । धेरै ठूलो डल्लो पलाएर गाह्रो परेको अवस्थामा अपरेसन गरेर हुन सक्नेसम्म सजिलो बनाउने बाटो पनि छन् ।' यस्ता समस्या भएकाहरूले अस्पतालमा सम्पर्क गरेर सल्लाह लिन जरुरी रहेको उनले बताए ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 6:57 PM
Constantly ridiculed by his peers who call him “two-headed”, 12-year-old Raghubir Mudiyari of Bhedibathan, Babiyabarta-3 has lost all interest in his studies. Lamenting that even his teachers did nothing to help him stave off the torments, Raghubir said he no longer wants to attend school.
Published in The Kathmandu Post on: 2014-11-15
भरसक जानै नपरोस् भन्न मन लाग्नेमा पहिलो नम्बर म अस्पताललाई दिन्छु । तर, आफूले चाहेर के हुन्छ ? जानै पर्छ । हिजो र आज म विराटनगरको कोशीअञ्चल अस्पताल पुगें । धरानका एकजना दाजैका ७२ वर्षीया दिदी भर्ती हुनुहुन्छ । दाजैले हिजो विहानै फोन गरेकाले सहयोगका लागि जानु पर्‍यो । गईयो ।
सर्जिकल फीमेल वार्ड, बेड नम्बर १२६ । उहाँलाई पत्थरीका कारण साह्रै दुखेकाले भर्ना गरिएको रहेछ । मुत्रनली र पित्तमा पत्थरी । १६ एमएम भनिएको रहेछ । डाक्टर र नर्सले हिजो 'अपरेसनको पालो पाउन ढिला हुन्छ, केही दिन भर्ना राखेर घर लैजानु । पछि माघतिर अपरेसन गर्नुपर्छ' भनेका रहेछन् । अस्पताल भर्ना भएपछि दुखाइ केही कम भएको रहेछ ।
बेलुकी ८ बजे फोन आयो । बिरामीकी छोरीले भन्नुभो 'भाइ, भोली बिहानै अपरेसन गर्नुपर्छ भने । के गर्नु ?' रोग भनेको काँडा हो, जति छिटो मिल्काउन सक्यो उति जाती । दिदीलाई मैले भने 'पालो दिन्छन र भोली नै हुन्छ भने अोके गर्नुस् ।' त्यही सल्लाह भयो ।
आज अपरेसन भयो । दुइ ठाउँमा भनिए पनि पत्थरी मुत्रनलीमा मात्रै भेटियो रे । अपरेसन थिएटरबाट प्लाष्टिकको सानो प्याकेटमा पाइएको सुपारीको कुड्कोजस्तो त्यो दुखाउने कुरो दिदीले ल्याएर देखाउनु भो । बिरामी बाहिर ल्याइयो । बेडमा राखियो । अपरेसन थिएटरको भीड बुढासुब्बामा बलि दिन भाले च्यापेर उभिएकाको लामभन्दा धेरै फरक थिएन ।
त्यो भीडमा असम्बद्ध मान्छेले ढोकाभित्र पस्न नि भएन । अल्ट्रा साउण्डको रिपोर्टमा दुइ ठाउँ पत्थरी भनिएको छ । हामीले सर्जिकलको नर्स बस्ने कोठामा गएर सोध्यौ । नर्सले बताइन-'दुइ भने पनि एक ठाउँमा मात्रै भेटिएछ ।' उनीसँग सवालजवाफ गर्ने कुरा पनि भएन । त्यो रातो बत्ती बलेको कोठामा पस्न नि पाइएन ।
यो बेला के लाग्यो भने अस्पतालमा विवाद र झगडा हुने मसिना कारण यी पनि हुन् । बिरामीको उपचार सजिलै भो, निको हुने लक्षण आयो भने ठीकै छ । कोही अझ सिकिस्त र कसैले मृत्युवरण गर्दा डाक्टर कुटिएको, तोडफोड र हुलहुज्जत भएका समाचार सुन्नमा आउँछन् । त्यस्ताको कारण यस्तै खालका अन्यौल त हुन् नि ।
बिरामीका आफन्तलाई 'तपाइको मान्छेलाई यस्तो भएको हो, यसरी उपचार गरियो' भन्न किन अस्पतालले कन्जुस्याँइ गरेको होला ?
अघिल्ला केहीपटक भन्दा यी बेड नम्बर १२६ की आमै भाग्यमानी । कारण- 'छिटै उपचार सम्भव भयो । अपरेसन भयो ।' तर, परिवारका सदस्यका दुविधा नर्सको भनाइले समाधान गरेन । मलाइ पनि स्वास्थ्योपचारबारे त्यस्तो ज्ञान छैन । तैपनि मैले दिदीलाई भने -'डाक्टर आउँदा सोध्नुहोला । नभए पछि एकपल्ट राम्ररी अल्ट्रासाउण्ड गर्नुपर्छ । पत्ता लाग्छ ।'
दिदी केही दिन अघिमात्रै काठमाडौंबाट फिरेकी हुन् । उनको भाइको १० वर्षे छोरा (भदा) लाई शरिरमा रगत नबन्ने रोग देखा परेको थियो । ६ महिना कान्ती बाल अस्पतालमा उपचार गराएर फिरेकी हुन् । केटो अझै तङ्ग्रिएको छैन ।
मैले बेड नम्बर १२६ को बिरामीलाई ख्याल गर्न लाइदिन एकजना मित्र (अस्पतालका प्रशासन कर्मचारी) लाइ भनेर बाहिरिएँ ।
जीमेलको इनबक्समा बेलुकी ८-९ बजेका बीच दिनहुँ एउटा मेल थपिन्छ । सेन्डर- रीजनल ट्राफिक पुलिस, सब्जेक्ट - ट्राफिक विवरण । कैले कैले जिल्लाका साथीहरूले पठाएका दुर्घटनाका तीन/चारवटा घटनाका समाचार कम्पाइल गरेर पत्रिकालाई मेल पठाइसकिएको हुन्छ, ट्राफिकको विवरणमा त्यसको उल्लेख हुँदैन ।
नछुटाइ पठाइने विवरण हो- आज कति चालक, यातायात व्यवसायी कार्वाहीमा परे । जरिवानाबाट कति राजस्व असुली भयो । मापसे कार्वाहीमा कतिजना परे, कति जरिवाना उठ्यो । यी मेल समाचारकै लागि साह्रै धेर स्रोतका रूपमा काम लाग्दैन । तैपनि साथीहरूलाई खोज्न सुझाव दिनेबेला कैले कैले यिनले विषय फुराउँछन् ।
एकपटक हो, नेपालगञ्जबाट विराटनगर आउँदा । एउटै ड्राइभरले १८ घण्टा बस हाँकेर ल्याउने देखेर सडक जोखिम भान भएको थियो । म साथीहरूका साथ बर्दियाबाट फिरेर नेपालगञ्जहुँदै विराटनगर आउने यात्रामा थिएँ । बाटामा सीट छाडेर क्याविनमा गइ बसियो । चालकसँग कुरा भयो । २२/२५ उमेरका हँदा हुन् । उनले भनेका थिए 'के गर्नु आठ दिनमा एकपल्ट पालो आउँछ । अनि २/२ जनाले कुदाउनुभन्दा एउटैले कुदायो । पैसा हो पैसा । पेटले यो जोखिम उठाउन बाध्य पारेको छ ।'
त्यो बस दिउँसो २ बजे नेपालगञ्ज बसपार्कबाट निस्केको थियो, बिहान ८/९ बजे विराटनगर पुग्नका लागि । हेटौडा आइपु्ग्ने बेला मैले साथीहरूलाई भने - 'एउटै गुरूजीले लग्ने रछन् । मान्छेको ज्यान हो, थाक्छ । के होला नहोला । उत्रिएर आज हेटौडा बसौं । विहान अर्कै गाडीमा जाउँला ।' साथीहरू सहमत भएनन् । समूह छाडेर म एक्लै उत्रने कुरा पनि निको थिएन ।
त्यति लामो बाटो ननिदाइ आइयो । बाटामा २/४ दुर्घटना पनि हेरियो । हामी सकुशल आइपुगेपछि गाडी छाडेर जानेबेला ती चालकलाई धन्यवाद दिएँ । हिजोआज पनि बसपार्क जाँदा सोध्छु, त्यो लामो रूटको तरिका उही नै रहेछ । फेरिएको छैन । चालक मेशिन होइन । मान्छे हो । मान्छेलाई भोक लाग्छ, प्यास लाग्छ, थाक्छ । ज्यानले निदाउनु पर्छ । ज्यानले आराम नपाइ लगातार काम गर्न सक्दैन । यदि गर्छ भने त्यो सोझै जोखिम मोल्नु हो । तर, स्थिति फेरिएको होइन । हेर्ने कोही छैन । राजधानी जाउआउ गर्ने अहिले कतिपय नाइट बसमा त्यस्तै रछ ।
बाइकमा दुइजना अलि लामो बाटो हिडियो भने केहीबेर कुदाएपछि म साथीलाई भन्छु ' ल अब हेटौंडा आयो । गुरूजी चेन्ज ।' तर, लामो दूरिका बसको बिग्रिएको बानी सोधिखोजी गरे अब त्यसरी भन्ने अवस्था पनि रहेन । हानीकहाँ नियम-कानूनका जति कुरा गरे पनि सुधार्नु पर्ने पहिलो र जरूरी कुरो बिग्रिएका बानी हुन् । क्षमताभन्दा बढि यात्रु नबोक्ने, खास स्थानहरूमा सीमित गति, सडकका लेन प्रष्ट हुनुपर्ने, छाडा र घरपालुवा पशु सडकमा छाड्न नहुने, चालक-सहचालकको स्वास्थ्य, खान्कीमा ध्यान र निश्चित दूरिपछि चालक फेरिनुपर्ने आदि धेरै यस्ता मसिना कुरा छन्, जसलाई ध्यानमै राखिन्न । ध्यान भएपनि बेवास्ता गरिन्छ ।
एक दिन ट्राफिकको मेलमा सप्तरीको शम्भुनाथमा लामो दूरीका बस रोकेर चालकलाई मुख धुन लगाई फ्रेस बनाइ पठाइयो भन्ने लेखिएको थियो । नौलो र उदाहरणीय लाग्यो, मैले ट्विटमा हालेको थिएँ । धेरैले फेव गरेका थिए ।
दुर्घटना सजिला सडकमा नहुने होइनन् । तर, हामीले जोखिम बोकेर गरिरहने यात्रामा सधैं अप्ठ्यारा छन् । जोखिम घटाउन पर्छ । यसका लागि जिम्मवार निकायले कडाइ गरे कसैले विरोध नगर्ला । जसले विरोध गर्छन् ती एक्लै पर्छन् । सुरक्षित यात्राको लागि जोखिम हुने मसिना त्रुटी पनि सुधारिनु पर्छ ।
हिजो मकवानपुरको वासामाडीमा भएको बस दुर्घटनाको खबर आजका अखबारभरि छन् । १० जनाको ज्यान गएछ । पढ्दा नि नरमाइलो लागेको छ । अस्ति अोखलढुंगामा जीप दुर्घटना हुँदाको खबर त्यस्तै थियो । त्यो गाडीको रूट पर्मिट र बीमा पनि रैनछ ।
जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने राज्य उदासीन हुँदा जनताले पत्याउन छाड्छन् । मनोमानी बढ्छ । जनताको आधारभूत अधिकारसँग गाँसिएका कतिपय सवालमै राज्य उदार बन्न सकेको छैन । यो बानी हटोस् । भयमुक्त भएर यात्रा गर्न पाइयोस् ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 3:26 PM